I-Live Nation izosebenzisana Nendawo Entsha ye-Omaha ye-Steelhouse... - Izindaba Zamathikithi
I-Live Nation Ijoyina Amabutho Kanye Nobuciko Bokwenza I-Omaha Njengomgqugquzeli Okhethekile We-Steelhouse Omaha.
Indawo entsha ye-Steelhouse Omaha-I-Live Nation ikhethwe yi-Omaha Performing Arts (O-pa) njengomgqugquzeli wenkundla entsha ye-Steelhouse Omaha, okuhlelwe ukuvulwa ngo-2023. Le nkundla, ezokwakhiwa njengengxenye yenkundla yenhlangano yezobuciko nokuzijabulisa. , izoba nomthamo wabantu abayi-1,500 kuya ku-3,000 kuye ngokuthi ihlelwe kanjani.
U-Joan Squires, uMongameli we-O-pa, uphawule wathi, Siyajabula ukungena kulobu budlelwano ne-Live Nation ukuletha ulwazi lwabo olusezingeni lomhlaba endaweni yethu entsha. Ukubambisana kwethu kuzophinde kusivumele ukuthi sisebenzise abaculi abasafufusa nabaculi esisebenzisana nabo futhi sibahambise kubalandeli be-Omaha.
Siyazi ukuthi kunemakethe yomculo ephilayo ethuthukayo e-Nebraska, futhi i-Steelhouse Omaha izoba indawo entsha enhle yabaculi abazoyidlala, kusho uJason Wright, uMongameli we-Live Nation Midwest. Sibona amandla amaningi ekuletheni imicimbi yesikhathi esizayo e-Omaha, futhi siyakwazisa ukubambisana kwethu ne-Omaha Performing Arts.
Indawo entsha ye-Steelhouse Omaha (1)
Ukuphathwa nokuqashwa kwabasebenzi be I-Steelhouse Omaha izosingathwa yi-Omaha Performing Arts. Kuzoba namathuba okuthi izinhlangano zomphakathi zisebenzise i-Steelhouse Omaha ngaphezu kwemicimbi ebukhoma nemidlalo ezokhuthazwa yi-Live Nation esakhiweni esisha, kusho u-Squires.
I-Steelhouse Omaha izokwengezwa kuphothifoliyo yendawo ye-O-pa, ehlanganisa ne-Orpheum Theatre kanye ne-Holland Performing Arts Centre. Kuzobiza u-$104.1 million ukwakha, kanti iDolobha lase-Omaha linikela ngezigidi ezingu-1.1 zamarandi emalini yomphakathi. Uhlaka lwensimbi lwesakhiwo lusanda kufakwa phezulu ngokufakwa kwebhande lokugcina, eliphezulu, futhi ukwakhiwa kusaqhubeka. I-Holland Performing Arts Centre iseduze nendawo yokwakha i-Steelhouse. I-Live Nation Ijoyina Amabutho Kanye Nobuciko Bokwenza I-Omaha Njengomgqugquzeli Okhethekile We-Steelhouse Omaha.
Ikhuphoni Lesaphulelo esingu-20% kumathikithi e-Super Bowl Isiyatholakala Manje; Amanani Athrenda Ehle!
I-Decentraland Metaverse: Umkhosi, umhlaba, Intengo yomhlaba, Isonto Lemfashini | Ulwazi Oluphelele!
Indawo ebukhoma ye-Sacramento ye-Hard Rock ezothuthukiswa yi-Live Nation.
Akukacaci ukuthi uhlelo lokuphromotha luzobandakanya amathikithi e-Steelhouse Omaha noma. Ithikithi i-Omaha manje isingatha amathikithi e-Orpheum Theatre kanye ne-Holland Performing Arts Center.
USergio Ramos uhamba phambili, leli phephandaba lithi, 'akabonakali egqoke ihembe' njengoba evele enqatshelwe yiqembu.